ကမ္ဘာအနှံ့ COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုအသစ်များ ပြီးခဲ့သောနှစ်လအတွင်း ဆက်လက်မြင့်တက်နေဟု WHO ပြောကြား - Xinhua News Agency
ဂျနီဗာ ၊ ဩဂုတ် ၁၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘာအနှံ့ COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုအသစ် အရေအတွက်သည် ပြီးခဲ့သော နှစ်လအတွင်း တိုးလာနေပြီး နိုင်ငံ ၊ နယ်မြေ သို့မဟုတ် ဒေသ ၁၄၈ ခုတွင် Delta မျိုးဗီဇပြောင်းပိုး ကူးစက်မှု ဖြစ်ပွားမှုများကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း(WHO)က ဩဂုတ် ၁၈ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သည့် အပတ်စဉ်သုံးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ပြီးခဲ့သောအပတ်တွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအသစ် ၄ ဒသမ ၄ သန်းနှင့်အတူ ယင်းဖြစ်ပွားမှုသည် အနောက်ပစိဖိတ်ဒေသ နှင့် အမေရိကတိုက် ဒေသတို့၌ ယခင်အပတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၁၄ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် ၈ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးမြင့်တက်လာသည်ဟု အဓိကမှတ်ယူနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့၌ ဇွန် ၁၇ ရက်တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက နှာခေါင်းစည်းကို လက်ကောက်ဝတ်တွင် ချိတ်၍ လမ်းလျှောက်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း တိုးလာသည့် COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုအရေအတွက်သည် ယခုအခါတွင် ၂၀၆ သန်း နှင့် သေဆုံးမှုစုစုပေါင်းသည် ၄ ဒသမ ၄ သန်းနီးပါး ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း(WHO) ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကတိုက် နှင့် ဥရောပတိုက် ဒေသများတွင် လူဦးရေ ၁၀၀,၀၀၀ လျှင် ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းသည် ပြီးခဲ့သော အပတ်က ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းများနှင့် အတူတူဖြစ်ပြီး ယင်းဒေသများရှိ လူဦးရေ ၁၀၀,၀၀၀ လျှင် ဖြစ်ပွားမှုအသစ် ၁၄၇ ဒသမ ၄ ယောက် နှင့် ၁၂၁ ဒသမ ၆ ယောက် အသီးသီးရှိကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံအဆင့်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအသစ် ၈၈၃,၉၉၆ မှု သို့မဟုတ် ၉ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာခြင်းနှင့်အတူ ပြီးခဲ့သောအပတ်တွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုသစ် အရေအတွက် အမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း ယင်းနောက်တွင် အီရန်နိုင်ငံသည် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၂၆၉,၉၇၅ မှု ၊ ၉ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာခြင်း နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ရောဂါသစ် ဖြစ်ပွားမှု ၂၅၈,၁၂၁ မှု ၊ ၇ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းခြင်း ရှိခဲ့ကြောင်း WHO က ဆိုသည်။
ထို့အတူ ပြီးခဲ့သောအပတ်တွင် အင်ဒိုနီးရှား ၊ ဘရာဇီး နှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့၌ သေဆုံးမှုအသစ် အမြင့်ဆုံးအရေအတွက်တွင် ရှိခဲ့ကြောင်း WHO က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ (Xinhua)
#Global #COVID-19 #rising #WHO #cases #ကမ္ဘာအနှံ့ #မြင့်တက်နေ #ရောဂါဖြစ်ပွားမှု #ဆင်ဟွာ #xinhua #Myanmar #xinhuamyanmar
GENEVA, Aug. 18 (Xinhua) — The global number of new COVID-19 cases has been increasing for the last two months, as cases of the Delta variant have been reported in 148 countries, territories or areas, the World Health Organization (WHO) said inaweekly overview report issued Wednesday.
With over 4.4 million new cases reported in the past week, the trend is largely attributed to increases in the Western Pacific Region and the Region of the Americas, which reportedarise of 14 percent and 8 percent respectively as compared to the previous week.
The cumulative number of COVID-19 cases reported globally is now over 206 million and the cumulative deaths are almost 4.4 million.According to the WHO report, the regions with the highest weekly incidence rates of cases per 100,000 population remain the same as last week, namely the Region of the Americas and the European Region, with 147.4 and 121.6 new cases per 100,000 population, respectively.
At the country level, the WHO said, the highest numbers of new cases in the past week were reported by the United States, with 883,996 new cases ora9 percent increase, followed by Iran (269,975 new cases,9percent increase), and India (258,121 new cases,7percent decrease).
Meanwhile, the highest numbers of new deaths in the past week were reported by Indonesia, Brazil and Russia, the WHO noted. Enditem
Photo 1 – A woman receivesadose of COVID-19 vaccine in Prayagraj district of India’s northern state of Uttar Pradesh, Aug. 6, 2021. (Str/Xinhua)
Photo2– A woman carrying her mask on wrist walks on the Champs Elysees Avenue in Paris, France, June 17, 2021. (Xinhua/Gao Jing)